Fampiratiana Sary Iombonana Eo Amin’ny Gresy sy Tiorkia Mampifanakaiky Azy Ireo Kokoa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Jona 2016 7:01 GMT
Vakio amin'ny teny English, বাংলা, русский, Español, Ελληνικά
Ny afisin'ny fampirantiana sary. Sary nozaraina an-tserasera.
Mampitambatra ny fakàntsarin'izy ireo amin'ny tetikasa lohataona iombonana ireo mpaka sary ao an-drenivohitra ao amin'ny nosy Grika roa ao Avaratry ny Ranomasina Egée, Chios (ao amin'ny nosy Chios) sy Mytilini (ao Lesvos), ary tanàna Tiorka roa ao amorontsirak'i Azia Minora, Bergama sy Izmir.
Miara-mampiantrano fampiratiana iombonana mitondra ny lohateny hoe “Hazavan'ny Manodidina” (Fos Geitoniko amin'ny teny Grika, Komşunun Işığı amin'ny teny Tiorka) ny Fikambanan'ny Mpaka sary Mytilini miaraka amin'ny Vondrona mpikirakira sary Izmir, Klioban-tsary Chios sy ny Vondrona mpikirakira Sary Bergama. Ny tanjona dia ny fifanakalozana hevitra, fahalalana sy traikefa, ary afaka maka sary izany tiany ireo mpaka sary, amin'ny tazana voajanahary sy sarin'ny olona mbola velona.
Nanangana finamanana sy fiarahamiasa maharitra mandritra ny taona maro ireo klioban-tsary ao amin'ny tanàna efatra ireo. Mino izy ireo fa ny fandriampahalemana sy ny finamanana no fomba tsara indrindra handresena ny olana ary ity zava-kanto ity, indrindra fa ny sary no fitaovana afaka mampifanakaiky kokoa ny olona. Fihetseham-po lehibe izany, manoloana ny tantara feno ady sy ny fahasahiranana misy eo amin'i Gresy sy Torkia.
Natomboka tao Bergama, Tiorkia tamin'ny 28 May ny fampiratiana. Notokanan'ny ben'ny tanànan'i Bergama, Mehmet Gönenç ny fampiratiana ary nandefa hafatra firarian-tsoa ny Kaonsily Jeneraly Grika ao Izmir, Argyro Papoulia, araka ny tatitra fohy tamin'ny gazety Tiorka Hurriyet.
Nizara sary tao amin'ny aterineto nandritra ny dian'izy ireo tao Bergama ny olona nandray anjara tamin'ny fampiratiana; jereo ato, ato ary ato ny sasany tao amin'ny Facebook.
Ao Izmir no hamaranana ny fampiratiana, toerana lehibe ho an'ny mponin'ny nosy ao Avaratr'i Egée, izay taranak'ireo mpitsoa-ponenana nandositra tao nandritra ny fahamaizana goavana tao Smyrna (izay efa Izmir ankehitriny) nandritra ny taompolo 1920.
Hoentina ao amin'ireo tanàna roa hafa ihany koa ny fampiratiana. Araka izany, raha sendra mandalo ny morontsiraky ny Ranomasina Egée ianao, tongava mitsidika izany: 2 Jolay ao Chios, 20 Aogositra ao Mytilini ary 8 Septambra ao Izmir!